Ukuhambelana kweLibra kunye neCancer: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo - Iimpawu Zezodiac
Isimahla Inyanga Nenyanga
Ukuhambelana kweLibra kunye neCancer: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo
Umhlaza kunye nokuhambelana kweLibra kukwemvelo, kuyathandeka, kwaye akukho nto imfutshane ngokugqibeleleyo. Xa le mimoya emibini idibanisa, ngumlingo osheshayo! Kufana nokungcamla itshokholethi kunye nebhotolo yamandongomane kunye okokuqala! Umhlaza kunye neLibra yimiphefumlo evuthayo, ekhokelela kunxibelelwano olunzulu nolunzulu. Benza ubuhlobo obungenakuqhekeka kwaye ikhaya labo liba yinqaba yothando.
Umhlaza kunye nesibini seLibra liqela elinoxolo. Umhlaza, njengononkala, ubunzima bamanyathelo asecaleni. ILibra ikumngcelele osisigxina wemvisiswano! Ukudibanisa aba babini emanyanisweni kufana nemvuselelo yowe-1967 Ihlobo Lothando!
Apha, uthando ludibanisa ii-archetypes zikaMama kunye neJaji. Umhlaza uneempawu zomama onobubele, onemfesane, okhulisa konke. Umhlaza ufuna ukukhusela iLibra kunye nothando lwabo olukhulayo. Bangumququzeleli weziko kunye nekhaya. ILibra imalunga nokugcina ucwangco. Ngokukhusela amandla oxinzelelo, kulawula uxolo. Omabini la maqela afaka isandla ekuzoliseni ixesha elide kolu thando.
Uluhlu lweLibra kunye neCancer Iziqulatho
Ukuhambelana kweLibra kunye neCancer
Uthando lweLibra kunye noMhlaza
ILibra kunye noMhlaza weSondo
Umhlaza womntu kunye nokuLungelelana kwabafazi baseLibra
Umhlaza womfazi kunye nokuhambelana kwendoda yaseLibra
I-Libra kunye neCancer Uthando lomdlalo wokuSonga
Buyela kuko konke ukuhambelana kweZodiac
Buyela kuzo zonke iZimpawu zeZodiac
Kumdlalo wothando weCancer kunye neLibra, le duo idibene nomdlalo wabo ontununtunu kunye neemvakalelo! Umhlaza ufuna uthando olubambelela emhlabeni. ILibra inyuka emoyeni ifuna uthando lwasezulwini. Phakathi kwabo, bafumanisa uthando olungafani nolunye emhlabeni okanye ezulwini!
ILibra ibambe ubuhlobo njengenye yeendlela zabo zokuphila eziphambili. Ukuba ubudlelwane beCancer kunye neLibra buqala kubuhlobo kuqala, unxibelelwano luyomelela. Umhlaza uxabisa usapho ngaphezulu kwayo yonke enye into, kodwa ukunyaniseka nako. Xa iLibra ibonisa ukuthembeka komhlaza ngobuhlobo, umhlaza uziva ukhuselekile ukuthandana.
Zombini ezi zinto zinomdla wokwakha umzi kunye kunye nokukhulisa usapho. Kodwa, ubukhulu becala, ikhaya lihlala lilawulwa yiCancer. Umhlaba ongaphandle apho ulindelo lwamathuba entlalontle alindileyo luhlala luyindawo yeLibra.
ILibra ifuna iqabane elinengqiqo nelinoxanduva. Umhlaza uhlangabezana neenqobo zoxanduva, kodwa ngamanye amaxesha vumela iimvakalelo zigqithise ukuziva kwabo. Injalo imeko xa uMhlaza esiba yivenkile yokurhalela kwaye aphule uhlahlo-lwabiwo mali losapho. Kuya kuthatha umonde omninzi kwicala likaLibra. Bayakufuna ukunyamezelana koothixo ukuze bajongane nokulingana kwekhadi letyala!
Umphambili wasekhaya kulapho okuqhelekileyo kwesi sibini kukhanya! Zombini ziyazixabisa izinto ezintle. Le duo inyanzelisa igumbi ngalinye ekhaya ukuba liphuphume ziziyolo ezibonakalayo. Yonke into ukusuka kumbala wephepha lodonga ukuya kwiitrayi zokuphosa kwigumbi lokuhlala zizigqibo ezidibeneyo. Iitrinkethi ezincinci ezithandekayo, iifoto, kunye nobugcisa buqaqambisa igumbi ngalinye. Xa iLibra iqinisekisa uCancer ukuba aphume usuku okanye ezimbini, uya kubafumana bethanda ukutya okumnandi. Ewe kunjalo, ukutya kuya kufuneka kuphezulu kwizakhono zokupheka ekhaya ezinomdlavuza ukuba izokwanelisa le duo!
Iimpembelelo zeplanethi kwiCancer kunye neLibra zidlala indima kwindlela ezi ntaka zothando zisebenzisana ngayo. Iimpawu ezilawulwa yiCancer's Moon zihambelana nemikhosi yobuthixo yobuthixo. Amandla anamandla achaza amandla abo eemvakalelo kunye nendalo engaqondakaliyo. Ngaphandle kweempembelelo ezahlukeneyo zeplanethi, ukuhambelana komhlaza kunye neLibra kuhlala kuphezulu!
Umfazi we-aquarius kunye nendoda enomhlaza ebhedini
Umhlaza uba yinto nje ekhawulezileyo kwaye yamkele iimpembelelo zenyanga. Kukho iimeko ezihamba kunye nokuhamba. Ukuhla nokuhamba okufanayo kulawula ibhalansi phakathi kwehlabathi elibonakalayo kunye neemvakalelo. ILibra inefuthe leVenus, ke zizinto zenyama ngokwendalo. Bayaluthanda unxibelelwano olusenyongweni abanokulwenza neCancer. Ubuntu beLibra buva imvakalelo yoxolo nanini na xa uMhlaza uvuleka kubo.
Impembelelo yenyanga yenza ukuba iCancer ibe ngumntu okhulisayo kwaye ofuna ukondliwa. Ilanga ngamandla obudoda ngelixa iNyanga isetyhini. Ke, uMhlaza olawulwa yinyanga ubamba indalo ethambileyo, ethambileyo, kunye nemfesane. Nokuba umba weCancer onefuthe ubalaselisa imeko yabo yokwenziwa kunye nokwamkela. Impembelelo kaVenus yenza iLibra ibe liqabane elithembekileyo, ngaphandle kweendlela zabo zebhabhathane zentlalo.
I-Cancer inokugqithisa malunga nexesha elilodwa. Xa iLibra isuka kwisangqa sentlalontle iye kwenye, umhlaza uziva umtsalane oya usanda! Ingoma ethi 'Ungandilibali Ngam,' ngumbungu wendlebe ombi odlala entloko yomhlaza. Okwangoku, ukuqaqamba ukuthanda uLibra kuva i-Lady Gaga's 'Ndiphilela ihlombe!' Kungcono ukuba amaqela kulo mbandela wothando awathathi nto. Endaweni yokukholelwa ukuba bayayazi into ethethwa liqabane labo, kungcono ubuze. Unxibelelwano oluvulekileyo kunye nokubuza imibuzo kususa iingcinga eziphosakeleyo, ezibangela iingxaki.
Umhlaza kunye neLibra kunokubonakala ngathi kulula. Kananjalo, kuyavela umbuzo wohlobo lwabo oluthandayo. Musa ukoyika! Kukho ubuninzi bobusuku obunomphunga kunye nenkululeko kwigumbi lokulala nezi zibini zenyama! Zombini iCancer kunye neLibra zizisa iimvakalelo ezinamandla ngasemva kwayo yonke into oyichukumisayo! Babhengeza uthando lwabo ngolwalamano olusenyongweni ngaphandle kokunye ukudibanisa okuqondayo!
ILibra ikhokela kwigumbi lokulala njengoko bengenangxaki yokuveza iimfuno kunye neminqweno yabo. Banendlela yangaphakathi, eqinisekisayo yokufikelela kuCancer. Ivumela amaqabane abo omhlaza ukuba azive ekhuselekile ngokweemvakalelo. Ingqondo yokhuseleko yinto eyimfuneko ngaphambi kokuba ivele kwiqokobhe labo lokukhusela. Apho, iLibra ilindile, ilungele ukubamkela ngezandla ezishushu. Ukuba nabani na unomonde wokulinda ukuvela kweCancer ngokweemvakalelo, iyahambelana iLibra.
Ikhowudi yokufumana ubudlelwane bezesondo emhlabeni ikwixesha labo lokuzibophelela. Isixa sexesha elinesiqingatha umhlaza nothando lomdlalo weLibra ozinikeleyo omnye komnye kubalulekile. Amanani amakhulu exesha labucala aqinisekisa unxibelelwano olukhulu lweemvakalelo.
Umhlaza bubuntu obuhamba kancinci, okhetha ukudlala izinto ngendlebe kunye nokuhamba nokuhamba. ILibra bubuntu obunamandla ekuhambeni. Bakhetha ukugcina isantya sobudlelwane siphila. Kuya kufuneka badibane embindini xa kufikwa kwinqanaba lokudibana kwabo ngokwesondo.
Yintoni evumelekileyo kwimenyu eyamkelekileyo yokuhamba ngokwesondo iya kuxhomekeka kwinto abayifumana ivumelekile. Umhlaza kunye neLibra bakwiziphelo ezichaseneyo zembonakalo ngokubhekisele kukhetho kwigumbi lokulala. ILibra ikhetha unxibelelwano oluhle lomzimba ngaphambi kokuntywila kwiimvakalelo. Umhlaza ukhetha unxibelelwano lweemvakalelo ngaphambi kokuba ungathinteleki emzimbeni.
Unxibelelwano lweLibra kunye noMhlaza
Uthando phakathi komhlaza kunye neLibra lumnandi. Kodwa, kukho ithuba lokuba kuya kuba muncu xa bengalumkanga. Ngelixa izinto eziqhelekileyo zixhobisa esi sibini, iyantlukwano isongela ukwahlula.
Enye into, iCancer isingeniso esipheleleyo. Bayakuthanda ukuba sekhaya nokukhulisa usapho. Njengononkala, bakhetha intuthuzelo yegobolondo labo. Ukuba banako, umhlaza uya kuhamba nabo ekhayeni labo naphina apho baya khona. ILibra, kwelinye icala, ibug yentlalo. Ubuntu beLibra sisidima somntu odumileyo. Bayakuthanda ubudlelwane kunye nesangqa sabo esikhulu sabahlobo kunye nabantu ababaziyo. Umhlaza uthule kwaye unemozulu. ILibra iyathetha kwaye iyabetha. Kule meko, amaqela kubudlelwane beCancer neLibra afana nobusuku nemini.
Umahluko, xa ungamkelwa bobabini, uphela uyindawo ebuhlungu kulwalamano lweCancer kunye neLibra. Xa iLibra ifuna ukuthetha ngezinto, uMhlaza ukulungele ukufihla iimvakalelo zokwenyani. Xa umhlaza ushukuma okanye ungonwabanga, iLibra iya kufuna ukuwuguqula ujonge ezantsi. Kulula ukuba iCancer neLibra zicaphukisane.
Ngelixa uthando luvuyisa, uLibra ucinga ukuba izimvo zomhlaza zothando azinyani. Umhlaza unoluvo oluthandwa ngaphezulu kothando. Imfuno yabo yokunyaniseka inokuwela umgca kwaye isoyikise imfuno yeLibra yenkululeko. Umhlaza unokujika imeko elula yentlalo kwisiganeko esimangalisayo. Kuyinyani xa isilwanyana esinamehlo aluhlaza senza ukubonakala. ILibra, ongakwaziyo ukuma xa isiphithiphithi siphakamisa intloko naphina, uziva ngathi ubalekela iinduli. Ukungavisisani okuninzi phakathi kwabo kungakhokelela ekugcineni ingqumbo.
Ukuxabana kweLibra kunye neCancer
Iingxabano kunye noxinzelelo zizonke kunye nokucinywa ngokupheleleyo komhlaza kunye neLibra. Nokuba impikiswano ilula, amaqela kubudlelwane beCancer kunye neLibra ayasebenza. ILibra ayinanyamezelo kuyo nantoni na eyenza amaza. Ukuphazamiseka kumlinganiso weLibra ongaphakathi kufana nokubalekisa iinzipho kwibhodi. Umhlaza uziva ngokufanayo. Ukoyika ukonzakala ngokweemvakalelo, nelona lincinci icebo lokungaboni ngasonye noMhlaza kwimo yoxinzelelo oluphezulu!
Kuba bayakuphepha ukuphikisana, kukho ithuba elikhulu lokuba nenzondo. Iimvakalelo ezihleliyo, ezingafumani sisombululo, zithathe ubomi zizonke. Kungathatha iinyanga okanye iminyaka ngaphambi kokuba umba ufike kwinqanaba lokungabuyiswa. Kodwa naziphi na iimvakalelo ezingathandekiyo ezibanjiswe sesi sibini sinamandla phezu kwazo. Inzondo zithe cwaka zilindele ukugrogrisa ikamva lothando.
Ukuthetha nokusombulula ukunyaniseka malunga neemvakalelo kwangethuba kuqinisekisa umdlalo omeleleyo. Ewe kunjalo, esi sibini kuya kufuneka sithethe into abayithethayo xa bethembisa ukuthetha ngeemvakalelo. Ukuthi baya kuvula nje ukuze baxolise umzuzu akwanele. Ngokuqinisekileyo kuya kuba neziphumo ezihlala zihleli xa bengalandeli.
ILibra kunye neCancer Polarity
Xa ujongene nokuvumisa ngeenkwenkwezi, yonke imiqondiso iyahambelana nepolarity. Ngomhlaza kunye neLibra, iipolarities nguYin noYang, ngokwahlukeneyo. I-Yin ngamandla obufazi. U-Yang uchasene.
Xa konke kulinganisiwe, iYin kunye neYang yimikhosi ehambelana nayo. I-Yin inovakalelo, ukwenziwa, kwaye ivulekile. I-Yang ithe ngqo, iya phambili kwaye iyaqina. Olu bhalansi lwendalo lunegalelo kuCancer nakwiLibra ehambelanayo.
Umhlaza ngumntu ongenzi nto kunye nolwamkelayo olu manyano. Bancedisa amandla e-Yang entlalontle, abaxhonyiweyo nabanomdla kwiLibra. Ukuba ngaphandle kwebhalansi, nangona kunjalo, amandla e-Yin kunye ne-Yang polarize.
Ukwahlula-hlula kubangela ukungalingani kwiCancer naseLibra. Ukuba umhlaza uyahluma, baye bangakhathali, bavaliwe, kwaye babe ndlongondlongo. Ukuba iLibra ifumana impembelelo yokwahlulahlulahlula, iswekile, imvisiswano yeLibra iba ngukumkani. Banokuba nokunyuka kunye nokuzithoba.
zingaphi iiplanethi ezikwi-solar system ngo-2018
Ukuphinda ulungelelanise amandla emva kokupheliswa, Umhlaza kufuneka wamkele amandla eYang. Ukwenza njalo kuya kubenza babe novakalelo, bavule, kwaye bamkele ngakumbi. Ngokunjalo, iLibra inokulandela ngokufumana amandla ngakumbi e-Yin. Iya kubanceda babuyisele iimpawu zabo zendalo, amabhaso, kunye neempawu eziqhutywa. Okwangoku, ukuqonda okuninzi kunye nomonde kuhamba ixesha elide ekuncedeni uthando lwesi sibini ukuba lukhule.
Imiba yeLibra kunye neCancer
Ekuvumiseni ngeenkwenkwezi, umgama phakathi kweempawu ezimbini kwivili lasezulwini yinkalo. Inqaku lilinganisa umlinganiso ngeenkwenkwezi kusetyenziswa ukumisela ukuhambelana komqondiso. Kumdlalo wothando weCancer kunye neLibra, amaqela ayimpawu ezintathu ze-zodiac ngaphandle. Inxalenye yeefom zomgama sisikwere.
Xa imeko yesikwere ikho, yenza i-angle ye-90-degree ebukhali okanye ebukhali. Khawufane ucinge ngemigca emibini edala le engile. Umgca omnye uthe tye kwaye omnye ume nkqo. Oku kuthetha ukuba kukho umlo oqhubekayo wemfazwe okanye ukuTsala kunye nokutsala uxinzelelo kolu lwalamano.
Indawo yesikwere iphakamisa ukuba iCancer kunye neLibra zihamba ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Baye bashenxela kude omnye komnye okanye omnye komnye. Xa ushiya kude, kunokubakho ukungavisisani ngokweemvakalelo phakathi kwaba babini. Xa usiya komnye nomnye, kukho ithuba lokubetha iintloko ngokuqinisekileyo!
Unxibelelwano lweCancer kunye neLibra luneziphazamiso ezibangelwa zizikhuselo ezinzulu zeemvakalelo. Xa esi sibini sijoyina kubudlelwane bothando, ezi zikratshi ziyaziveza. Ingathi lithuba lokujongana nemicimbi kube kanye. Ngaba wakhe waliva ilizwi elithi, 'Akukho kuphumla kwabangendawo?' Ewe, ngelixa iiCancer kunye neLibras zingendawo (ngaphandle kokuba bafuna ukuba 'wink'), akukho kuphumla kwabo! Lo mdlalo wothando uthatha ukuzinikela okuninzi kwaye usebenza ukuwenza uhlale uhleli!
ILibra kunye neCancer Elements
Zonke iimpawu ze-zodiac zihambelana nenye yezinto ezine. Umhlaza ungqamana naManzi. ILibra iyahambelana noMoya. Ekuqaleni, umntu unokuzibuza ukuba zisebenza njani iimpembelelo zamanzi nomoya. Umhlaza yiyo yonke imvakalelo. ILibra bubukrelekrele bonke. Kukungqubana ngokoqobo kwentliziyo nengqondo. Kwangelo xesha, xa ujolise kwiimpawu ezomeleleyo, esi sibini sinokwenza into yokwenene.
Uphawu lweCancer lwenza umntu anomdla, abuthathaka kwaye aphendule. Umqondiso weLibra wenza ukuba umntu abe nokuzithemba, azithembe, kwaye abe namabhongo. Xa umhlaza ulahleka kwisaqhwithi ngokweemvakalelo, iLibra isebenza njengesibane sokukhanya. Xa iLibra ibeka ugxininiso olukhulu kumabhongo, iCancer sisikhokelo sokubeka umnxibelelwano kwimicimbi yentliziyo.
Umhlaza kufuneka uphuhlise ukuqonda kwesidingo seLibra sentlalontle. ILibra kufuneka ibhekane neemfuno zomhlaza zexesha elithile lodwa kube kanye. Omabini la maqela kufuneka avule imbonakalo yeemvakalelo ukuphepha ukunxibelelana. Isibini esingaqhelekanga yinkcazo elungileyo yomdlalo weCancer kunye neLibra. Kodwa, oko akuthethi ukuba akukho thuba lothando! Xa umdlavuza nothando lomdlalo weLibra ubonakalisa uxabiso ngesuti yomnye nomnye, uthando luyatyatyamba. Ngapha koko, kukubhangqa okukhokelela ekukhuleni kwinqanaba lobukrelekrele kunye neemvakalelo zomhlaza kunye neLibra.
Indoda yomhlaza kunye neLibra Woman yenzela isibini sasekuhlaleni nesithandekayo. Olu thando lubambe isithembiso ngokubonelela ukuba bahlala bejongile. Indoda yeCancer yenye yamagama ambalwa yokuthetha ngokweemvakalelo. ILibra kuyakufuneka iguqule ulwimi lomzimba wayo, iintshukumo, kunye neempawu zomzimba ukuqonda okucingayo. Akunjalo ukuba akanalo uvakalelo. Kufana nangamagama angenakho ukubonisa ubungqingqwa bokwenyani beemvakalelo zakhe.
Umfazi waseLibra ngumphefumlo onikelayo, umenza umdlalo owenziwe ezulwini kwiCancer Man. Ungaphaya kwezothando, nto leyo emenza abe nomtsalane nangakumbi. Indoda yoMhlaza iyayithanda imeko yayo kunye nobabalo lwendalo. Uhlala enxibe kakuhle. Umfazi waseLibra unyanzelisa ukuba ajonge okona kulungileyo kuyo yonke inxaxheba kwezentlalo. Uyathandeka kwaye uyalahlekisa ukuze iNdoda yoMhlaza ifumanise ukuthandana nayo yonke into ekulula kakhulu ukuyenza!
Amaqela kubudlelwane bomhlaza kunye neLibra ayaqondana ngeendlela abanye abangaziqondi. Bayabazi ubunzulu beemvakalelo iqabane ngalinye elizivayo kunye nesidingo seqabane elithembekileyo. Le duo ihlala inyanisekile omnye komnye kwaye izibophelela kusapho abalakhayo.
Yintoni eyenza iNdoda yoMhlaza ifumane uMfazi waseLibra nomtsalane ngakumbi yindlela amazi ngayo. Izenzo zakhe azisoloko zihambelana noko uziva, kodwa akunyanzelekanga ukuba enze iingcaciso. Umhlaza uyazi ukuba ayisoloko ingoyena mntu kulula ukubakho.
Uyazi kakhulu ngokutshintsha kweemeko zakhe kunye nobushushu. Kodwa, uMfazi waseLibra umnika nje isixa esifanelekileyo sendawo ayifunayo ukubuyisa ulungelelwaniso lweemvakalelo. Uyakuthanda ukunyaniseka kwakhe kwaye akaze akhathazeke uya kuzama ukumkhohlisa.
Umfazi waseLibra uziva enentembelo kukhetho lweqabane lakhe xa edibana neCancer. Umhlaza kunye nokuhambelana kweLibra kuyaqina xa iLibra iqonda ukuba uMhlaza womntu ungumntu wasekhaya. Akanangxaki yokumfumana ukuba ahlale ekhaya ubusuku bokulala esofeni.
Indoda yeCancer ipheka ukutya okumangalisayo njengoko ikufumanisa kuyindlela yendalo yokondla abo ibathandayo. Uye anyamekele abantwana ngelixa uMfazi waseLibra efuna ixesha kude. Akumangalisi ukuba akufumanise kulula ukuthandana naye. Uyathandeka kodwa uthule kwaye ufumana ubukho bakhe obunentloni bupholisa ekupheleni kosuku oluxakekileyo.
Ukutywina isibophelelo phakathi komhlaza kunye neLibra kukunxibelelana kwabo kwengqondo. Umhlaza uzifihla iimvakalelo, kodwa iLibra inokuzithatha ngokuzilolonga kwindalo yakhe enomdla. Usenokungayazi ncam into engalunganga kodwa angaziva xa into icimile. Inika uMfazi waseLibra ithuba lokuba abuze iNdoda yakhe malunga noko kusengqondweni yakhe.
Konke kulungile xa ii-vibes ziyahambelana. Kodwa, ukuba uMhlaza uvumela ubume bakhe obumnyama bukhululeke, unokuveza utyekelo oluqinileyo. Inyani elula kukuba ngumhlaba wakhe. Amaxesha amaninzi uyigcina phantsi kwe-wraps, kodwa ukuba ukrokrela ukuba iLibra isenokuphambuka, uyakuyenza into yokuba ukhathazeke kwaziwe. Ngamanye amaxesha indoda yomhlaza iyabhida umfazi waseLibra. Xa etshintsha ukusuka kwenye imo ukuya kwenye ngaphandle kwesaziso, kuyenza iLibra izive ngathi yeyokuhamba ngentambo. Enkosi uthixokazi yena konke malunga eseleyo.
Umbuzo wokuba ingaba umba wokuhambelana nomhlaza kunye neLibra uphezulu okanye awunako ukuphumla. Kukho unxibelelwano oluhle phakathi kwale miphefumlo mibini. Ngomlinganiselo ofanelekileyo wokunyamezela nokuqonda, iparadesi ilindele.
Xa uMfazi woMhlaza kunye neLibra Man beqala ukudibana, ulwalamano lwendalo luyacotha. Akukho qela lingxamile ukuya kuthatha eluthandweni. Umfazi onomhlaza uneentloni, ke ngoko kuthatha ixesha lokuba avumele iLibra ingene kulo naliphi na inqanaba. Indoda yaseLibra inesineke nayo ngenxa yendlela enobuntu, enobuntu. Unalo lonke ixesha emhlabeni kwaye umfumana enomtsalane ngokwaneleyo ukuba kufanelekile ukulinda.
Kumdlalo wothando weCancer neLibra, amaqela acela umngeni kwaye ayakhuthazana. Indoda yeLibra yomelele kwaye inovakalelo. Umfazi woMhlaza uqala ukumbona njengeNkosana yakhe eyayilahlekile ixesha elide. Umnika ukhuseleko alunqwenelayo kunye nendawo ekhuselekileyo yokuthetha ngokweemvakalelo. Xa eziva ekhuselekile, uyadubula. Kulapho ubudlelwane beCancer kunye neLibra buyekeze nakuphi na ukuthintela kwigumbi lokulala.
Indoda yaseLibra iyila kwaye inokwenyama. Kananjalo, ukudlala indima kunye nefantasy yinxalenye enkulu yamava okulala kolu lwalamano. Xa esebenza indlela yakhe entliziyweni yakhe, indoda yaseLibra ijika uthando lube ngamava okomoya.
Kodwa, nokuba ujongene nokuhambelana okuphezulu, olu lwalamano lunemiceli mngeni. Enye into, iCancer ngumphefumlo okhulayo. ILibra iyahlalutya kwaye ngamanye amaxesha ibaluleke kakhulu. Ukugxekwa kuchasene ngokuthe ngqo nenkathalo yomhlaza. Xa iNdoda yeLibra igxeka kakhulu, umhlaza uyayibona njengokuzithoba kunye nokuzola. Ukuba umhlaza uthambe kakhulu okanye uyashushuzela, iLibra elawulwa ngumoya ivakalelwa ngathi ithatha inqwelomoya. Njengebhabhathane, ukuba uCancer uzama ukubagcina, bathabathe umngcipheko wokonakalisa amaphiko ebhabhathane.
Ukuhambelana kwendoda kunye ne-scorpio kwabasetyhini
Indoda yeLibra iyabiza. Uhlalutya yonke ipeni ayichithayo. Umhlaza kukuchaphazeleka ngokweemvakalelo. Bathenga izinto ezinomtsalane kubuhle babo. Uyakuthanda ukuthenga izipho ezihambisa iimvakalelo kwabanye. Yiyanelisa isidingo sakhe sokondla kunye nokukhetha kwangaphambili ukubonakalisa iimvakalelo. Into engonelisiyo luhlahlo-lwabiwo mali losapho olucwangciswe kakuhle!
Umhlaza ubonakala ungazinzanga ngamanye amaxesha xa eneemvakalelo ezikhawulezayo. Ngelixa kunokunyamezeleka okwethutyana, i-Libra ezinzileyo iqala ukufumana imeko eziguqukayo ezicaphukisayo. ILibra ifuna ibhalansi rhoqo. Ngaphandle kwayo, kubakho iingxabano. ILibra inokuzimela kwaye ibande xa unomsindo. Banokuthetha izinto abazisolayo ngazo kamva. Ngomfazi onomhlaza, akunakwenzeka ukubuyisa into ethethwa nguLibra kubushushu bomsindo.
Umhlaza kunye nokuhambelana kweLibra kuthembisa uthando olude kunye oluhlala luhleli. Esi sibini senziwe ngabantu abadala ababini abakhathalayo. ILibra izisa uzinzo, ulwakhiwo kunye nokuqonda kwitafile. Umhlaza uletha iimvakalelo ezinzulu kwaye ukhuthaze iLibra ukuba ibe yiyo yonke into abanokuba yiyo. Aba babini benza amaqabane amabi. Xa benabantwana, bazisa ibhalansi ekhethekileyo kwimizamo yokuba ngumzali. Ewe banemiceli mngeni koku kubhangqwa. Kodwa, ayisiyiyo nantoni na ukunyamezelana nothando olungenako ukoyisa!
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ubudlelwane bakho babelana ngenqanaba elifanayo lokuhambelana? Nivana njani neqabane lakho? Ngaba uyazi ukuba yintoni esebenzayo kubudlelwane bakho, ngaloo ndlela uqinisekisa uthando oluhlala luhleli? Imihla ngemihla iHososcope Astros ineempendulo kuwe! Jonga ukuhambelana kweminye imiqondiso ye-zodiac ngoku! Xhobisa ngolwazi oludingayo kubudlelwane obunothando obunempumelelo!
Funda konke malunga noMqondiso weSifo seZodiac
Cofa ukuze ufunde konke malunga Iimpawu zomhlaza, ubuntu, kunye neempawu !
Ufuna uthando? Cofa ukuze ufunde konke malunga Ukuhambelana komhlaza !
Fumana ulwazi olunzulu malunga Umhlaza womntu !
Chaza imfihlelo ye Umhlaza womfazi !
Ngaba Unentombi Yomhlaza okanye Unyana? Cofa ukuze ufunde konke malunga ne Umhlaza womntwana !
Funda konke malunga neLibra Zodiac Sign
Cofa ukuze ufunde konke malunga Iimpawu zeLibra, Ubuntu, kunye neempawu !
Ufuna uthando? Cofa ukuze ufunde konke malunga Ukuhambelana kweLibra !
Fumana ulwazi olunzulu malunga Umntu weLibra !
Chaza imfihlelo ye Umfazi waseLibra !
Ngaba Unentombi yeLibra okanye uNyana? Cofa ukuze ufunde konke malunga ne Umntwana weLibra !
Leo indoda kunye netaurus ubuhlobo bomfazi
libra umfazi kunye nesagittarius indoda ngesondo
yintoni umbala woxolo
umfazi we-sagittarius kunye ne-sagittarius indoda ebhedini